Sonos dia hampiditra AirPlay 2 sy Siri amin'ny mpandahateny | Vaovao IPhone
Sonos dia hampiditra ny AirPlay 2 sy Siri ho ao amin'ireo mpandahateny
Tahaka ny ho avy tsaho Efa am-bolana maro izao, ny orinasam-peo malaza malaza Sonos dia efa nanambara ny famoahana a mpandahateny mahay vaovao, ny Sonos One, inona no ho mifanentana amin'ireo mpanampy nomerika marobe, toa ny Alexa's Amazon na Google Assistant, fa midika ihany koa ny fahatongavan'ireo vaovao mahaliana ho an'ireo mpampiasa Apple.
Ny orinasa Sonos koa dia nanambara tamim-pomba ofisialy ny tetikadiny hampidirina ny fampisehoana playback mozika tsy misy tariby vaovao AirPlay 2 Apple amin'ny mpandahateny tsy misy tariby. Ary tsy izany ihany.
Hifankahazo vetivety i Sonos sy Siri
Ofisialy izao. Sonos dia mikasa izany AirPlay 2, Teknolojia tsy misy tariby an'ny Apple, mifanaraka amin'ny mpandahateny aminy, ary nambaran'ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy. Niverina tany amin'ny sehatra ity vaovao ity nandritra ny Fihaonambe farany an'ny World Wide Developer tamin'ny volana Jona ho endri-javatra iray amin'ny iOS 11 izay hiara-miasa amin'ny HomePod izay kasain'i Apple hapetraka amin'ny faran'ny taona, mpandahateny Beats vaovao, ary koa vokatra hafa avy amin'ny fahatelo -pamoaka antoko.
Hatreto, tsy nanohana ny teknolojia AirPlay 2 an'ny Apple i Sonos, nandao fotsiny ny fikasany hanao izany amin'ny ho avy.
Miaraka amin'ity zava-baovao ity, nanamafy izany koa i Sonos ireo mpandahateny tsy misy tariby dia azo fehezin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'i Siri toy ny iPhone na iPad, misaotra indrindra fa noho ny fanohanan'ny AirPlay 2. Vokatr'izany dia tokony avela ihany koa io fifanarahana vaovao io izay atiny misy amin'ny iOS fa tsy misy amin'ny Sonos amin'izao fotoana izao dia azo lalaovina amin'ny mpandahateny Sonos (toy ny Overcas, Apple Podcasts, sns.).
Amin'izany heviny izany, ilay vao nambara Sonos One izay hatomboka amin'ny 24 Oktobra amin'ny vidiny 229 euro ary afaka amandrihana izao ao amin'ny tranonkala ofisialy Amin'ny marika, hiara-miasa amin'ny AirPlay 2. Ary amin'ny fanitarana, izahay dia mamintina fa ny mpandahateny Sonos rehetra dia tokony hiasa miaraka amin'ity teknolojia ity ihany koa, na dia mbola hamafisina aza izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Sonos dia hampiditra ny AirPlay 2 sy Siri ho ao amin'ireo mpandahateny
Apple dia mankalaza ny herinandro kaody eropeana miaraka amina fandaharana fandaharana maimaimpoana
Ahoana ny fomba hanafahana ny habaka amin'ny iPhone amin'ny famafana automatique ny rindranasa amin'ny iOS 11